Tun Tun on Flipboard
32 Flips |2Magazines | @lapyaewoon | 1948born.Medical Laboratory Technician.Interesting in medical,photograph,reading and painting.
Man with no face transports viewers<p>#Painter Lao Shu's #Chinese ink-wash paintings portrayafeatureless gentleman named Mr Minguo, who wearsalong …
Why does my body have to look like the scorched desert? Not today, Satan.<p>Dr. Adam Friedman, Director of Dermatologic Research at Montefiore Medical Center, explained it this way to Buzzfeed Life: "Individuals with eczema tend to have defects in the way their skin makes the "cement" that cross links …
What if looking at your skin could tell you whether or not serious cardiovascular issues are in your future? While connecting those dots isn't quite that simple, new research in <i>The Journal of Allergy and Clinical Immunology</i> found that, out of more than 61,000 adults surveyed, those with the …
17 things you’ll only know if you have eczema
To anyone who complains about having dry skin in winter, you seriously don’t know the half of it.<p>Eczema isaseriously unpleasant skin condition, and …
Finally,away to make those flaky and itchy patches disappear<p>Everyone getsascaly spot or two when it’s frigid outside, right? It might be true, but all dry patches aren’t made equal. Some takealittle more thanadab of lotion to go away and might linger for weeks (or months!), getting worse …
လိမ္မော်သီးခွံတွေရဲ့ အသုံးဝင်လွန်းလှတဲ့ အချက်များ လိမ္မ်ာသီးကို ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အများဆုံး အသီးထဲက တစ်ခုလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအပြင် သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ အရသာနဲ့ များစွာသော ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟော့ဒီမှာ… လိမ္မ်ာသီးခွံနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ဝေမျှချင်ပါသေးတယ်။ (၁) အသားရေကို ပိုမိုလှပစေပါတယ်။ အသားရေ ဝင်းပချောမွတ်ပြီး လှပစေချင်ရင် လိမ္မ်ာသီးခွံတွေကို အဝတ်ဗီရိုထဲထည့်၊ ရေချိုးနေစဉ် ကိုယ်တိုက်ရေမြုပ်အဖြစ် သုံးပါ။ ဒီနည်းက အရိုးရှင်းဆုံး၊ ကိုယ်ခန္ဓာအရေပြား ဝင်းပစေတဲ့ နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အင်းဆက်ပိုးတွေကို မောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ္မ်ာခွံတွေကို အင်းဆက်ပိုးများ ဝင်လာတယ်လို့ထင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ချထားပါ။ ခြင်တွေ၊ ပုရွတ်ဆိတ်တွေနဲ့ ပိုးဖလံတွေက လိမ္မ်ာသီးခွံတွေမှာ ပါဝင်တဲ့.... အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.shwechitthu.com/2014/12/blog-post_534.html